Dankook University - Yepamusoro Kunze mu South Korea
inotangwa : 1947
Musakanganwa kuti kurukura Dankook University
Kunyoresa pa Dankook University
Under dzakavamba mottos pakati “National Salvation, Independence uye Self Reliance,” uyewo chinotungamirira dzekutanga “Chokwadi uye Service,” Dankook University ave akatendeka dzayo mishoni pakati kushambidzika tarenda muduku uye kufambisa mberi zvechikoro.
mu 1967, Dankook University akanga pakukwana payunivhesiti chinzvimbo. Pakatanga yechipiri pazvivako muna Cheonan, DKU akava wokutanga pakati mumayunivhesiti Korea kuti kuva bazi kembasi. DKU raramba wayo tisaone kukura pamwechete mawindo waro chipatara mazino zvechimbichimbi munyika 1984 uye muchipatara mukuru muna 1994.
pashure 60 makore nhoroondo anozvikudza muSeoul, DKU kutamiswa huru kembasi wayo Jukjeon mu 2007, achiedza kugadzirira chokubaira hofori achikwakuka mberi munyika yose zera. pashure 30 makore vakazvipira muunganidzwa, isu wapedza “An Unabridged Dictionary of Chinese Characters Richishandiswa Korean” – wakarebesa uye chinonyanya hwakadzama rwayo. Pamusoro pe, pashure anobudirira 2010 udzai kuti Pharmaceutical College pamusoro Cheonan pazvivako, takaita nheyo yakasimba kushandisa muupenyu sayenzi. The Cheonan kembasi LINC Project Group akasarudzwa sezvo rwacho zvikuru, uye yave paakaranga mabasa akasiyana-siyana pasi chinangwa Ndokunyengetererai mureza kuti pamwe indasitiri-yunivhesiti. Zvichakadaro, ari Jukjeon ritenderane akaita pfungwa dzayo tsvakurudza uye mari pamusoro Information Technology (iT) uye Culture Technology (CT). With ichangobva kubudirira hurumende muzvirongwa, 'Intellectual Property Education Project’ uye 'Kukudziridza Project nokuda Startup-Leading Africa,’ ari Jukjeon pazvivako ari kutora achikwakuka itsva mberi kuti ave muzinda indasitiri-yunivhesiti pamwe uye mabhizimisi startup zvirongwa.
Tichangobva akagumisa hombe kugadzirisa mumakoreji edu uye okutarisira enyika sechikamu zvatinoedza kutsvaka Dankook University munguva yemberi somumwe munyika-kirasi mumayunivhesiti. Uyezve, takavaka kumusoro-of-the-mutsetse webasa hurongwa kuti zvinogutsa mutengi zvinodiwa, Anoshandisa nhau itsva uye zviri dzidzo, uye anovimbisa rikurumidze tsvakurudzo uye kutarisira. Pachishandiswa Zvakawanikwa izvi, DKU akaita revatema pazvikoro ayo uye akatanga 'Dual kembasi System’ kutangira 2014, izvo chinotarisa specialization.
Pasi mureza wenyika “Challenge uye Creation,” simba rorusununguko uye tsvimbo Dankook University vachaita zvose zvavanokwanisa kuti rinowedzera makwikwi pakati DKU uye vachikwidziridza mamiriro ari Dankook muchiso. Please afadze nokuti Dankook kuti “Challenge uye Creation” sezvo isu kuti achikwakuka kuva mutungamiri enguva itsva.
Purezidhendi Dankook University
Dzakavamba muuzivi Dankook University - National Salvation, Independence uye Kuzviriritira - zvinobva pauzima neururami izvo havaoni edu Mr. Beomjeong, Chang Hyong uye Mrs. Hyedang, nokuti Huijae vakanga kurimwa pachavo kuburikidza inonetsa munhoroondo Korean. Vakanga azvionera kurwadziwa kunokonzerwa nokuurayirwa nyika yavo pasi pokutonga Japanese uye pakupedzisira vakanga nechokwadi chokuti rusununguko aigona chete kuitwa kuburikidza tichidzidzisa unyanzvi uye nyika vanhu. The havaoni vaviri vakaziva kuti vakadzidza vaifanira kushandisa mano avo zvisiri zvokuti azvipfumise asi rudzi rwose, rinosundwa nepfungwa zvitupa uye nhoroondo yechokwadi / magariro. chaizvo, vaidavira zvakanga Dankook University sesungano kudzidzisa kwakadaro vakambovhenekerwa vanhu.
Kuwedzera vavariro dzakanaka zvakadaro, Dankook University anokoshesa chokwadi uye basa sezvo richititungamirira ayo mazano. Zviri kutenda kwedu kuti chinangwa kutsvakurudza uye kudzidza nhema zvinopfuura kungoti muchiwana maturusi aizomutsigira - chinangwa chikuru yepamusoro ndiwo vapfume zivo kwevanhu uye tsika nemagariro. zvikurukuru, Nyanzvi tinosungirwa kudzokera ruzivo zvakadaro nzanga uye ifambire mberi nhoroondo. Vanofanira kukudziridza inopinza, dzinonetsa pfungwa uye akarurama tsika; nokuita saizvozvo uye nokuzvidira pokuita upenyu nzanga yose zvayo, mumwe rinosanganisa nzira Dankook achida kusimuka. Rwave kusingazununguki kuzvipira kune kuziva mabasa yepamusoro uye uchiratidza kuzvipira kunyika yako zvokuti kwakaita kuti Dankook University ariko racho iyezvino muchimiro.
College of Art uye Design
College of Management uye Business
College of Engineering, ari College of Architecture
Hwaro Dankook University akabvumirwa musi November 1, 1947, nomukova wayo kuitika panguva Nakwon-dong, Jongno-gu, Seoul, musi November 3 iroro.
The yunivhesiti kwakatangwa kwakavakirwa mari yezvipo kuti mukupera Hyedang, Cho Huijae uye yaimbova sachigaro Park Jeongsook, uyewo dzidzo muuzivi Beomjeong, Chang Hyong. At nheyo dzaro, kuyunivhesiti akanga 960 vadzidzi, mbiri madhipatimendi ari rorusununguko Mutemo uye madhipatimendi matatu rorusununguko Liberal Arts. Professor Chang Dobin yakanga yavakwazve sezvo wokutanga dhini.
Unoda kurukura Dankook University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Dankook University musi Map
Photos: Dankook University pamutemo Facebook
Dankook University wongororo
Join kukurukura pamusoro Dankook University.